/blog/Gallery/Sidee bay Flibanserin u Caawisaa Haweeney sida Hormoonka Jinsiga
Posted on 11 / 11 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Su’aasha ugu weyn, hase yeeshe, waa; sidee u shaqeysaa? Ma jirin raadsi cad oo laga helay habka loo adeegsado dawadan si loo soo saaro natiijooyinka. Si kastaba ha noqotee, cilmi baarayaashu waxay la yimaadeen aragti, iyagoo raacaya xaqiiqda ah in serotonin ay mas'uul ka tahay xakamaynta shaqada galmada, waxayna ogaadeen in Flibanserin (167933-07-5) waxay yareysaa waxqabadka serotonin ee maskaxda. Tani, iyaduna, waxay dib u soo celinaysaa rabitaankii galmada ee haweeneyda. Sidoo kale, dawadu waxay si aan toos ahayn u saameyneysaa norepinephrine iyo dopamine, kuwaas oo waliba kuxiran damacyada galmada ee la xoojiyay.
Hadaad seegto Flibanserin Qiyaasta dawada inta lagu jiro wakhtiga jiifka, waxaa lagu talinayaa inaad sugto ilaa wakhtiga jiifka xiga si aad u maamusho daawada.
Sida laga soo xigtay daraasado badan iyo falanqaynta hoc post, haweenka postmenopausal iyo dumarka premenopausal ee dawadan u isticmaalay hypoactive Galmada Rabitaanka jahwareerka ayaa u badan inuu miisaanku lumo. Aynu wajahno. Dumar badan ayaa ka warqaba culeyskooda waxayna ka baqayaan inay adeegsadaan wax kasta oo saameyn xun ku yeelan doona miisaankooda. Waa dareen farxad leh oo lagu garto in la ogaado in isticmaalka FLIBASERIN uusan wax culeys ah ku kicin bini-aadamka, laakiin taa bedelkeeda, ay ka caawiso iyaga inay daadiyaan xaddi weyn oo miisaan ah. Haddii aad la halgameysay dhibaatooyinka miisaanka oo aad raadineysay hab aan dadaal lahayn si aad u daadiso, daawadan ayaa ah mid dheeri ah.
Adeegyada Dijitaalka ah ee Dijital ah ee loo yaqaan 'Digital Digital Services' LLC - Kdp Noogu Soo Daabaco, 2018, Pink Viagra (Flibanserin): Hagaha Buugga ee Kiniinka xoojinta jinsiga ee Kaciyaarta Kacsi galinta Dumarka isla markaana ka caawinaya Haweenka Inay Guul ku gaaraan noocyo badan, 1729471161
Borsini F, Evans K, Jason K, Rohde F, Alexander B, Pollentier S (2002). “Daawada Farmashiyaha flibanserin”. Dib-u-eegista Maandooriyaha CNS. 8 (2): 117 – 42.